Fohy fampidirana ny gearbox - Nantong ANT milina Co., Ltd Error 400 (Bad Request)!!1
A milina dia ahitana ny hery sy ny fahefana loharano rafitra fampitana, Fehezo tsara izay manome fampiharana ny fahefana. matetika fifindran'ny dia manondro fotsiny ny gearbox izay mampiasa Gears sy ny fitaovana fiarandalamby mba hanome ny hafainganam-pandeha ary ny Torque fiovam-pony avy amin'ny loharanom miodina hery hafa fitaovana
ny teny hoe fandefasana manondro ny fiara rehetra fiaran-dalamby, anisan'izany ny clutch, gearbox, hevi-dehibe zana-tsipìka voalambolambo (fa aoriana fiara-kodia), Differential, ary ny zana fiara farany.
Ny tena mahazatra dia ao amin'ny maotera fampiasana fiara, izay ny fandefasana adapts ny Output ny anatiny setroka maotera ny fiara kodia. Toy izany fitaovana mila somary miasa amin'ny hafainganam-pandeha avo rotational, izay tsy manara-penitra Hanombohana, nijanona, ary miadana kokoa Travel. Ny fandefasana ny ambony maotera mampihena hafainganam-pandehan'ny ny kodia miadana kokoa ny hafainganam-pandeha, fitomboan'ny Torque ao amin'ny dingana. Fampitana ihany koa ny ampiasaina ao amin'ny pedal bisikileta, raikitra milina, ary na aiza na aiza ny hafainganam-pandeha sy ny Torque rotational tsy maintsy ampifanarahana
Fampitana koa ampiasaina amin'ny fambolena, indostrialy, construction, fitrandrahana ary ny fiara fitaovana. Ankoatra ny olon-tsotra fifindran'ny fitaovana amin'ny Gears, fitaovana toy izany dia mahatonga be dia be ny fampiasana ny fiara sy ny herinaratra hydrostatic Adjustable-hafainganam-pandeha aelin'ny
Prev: Inona no niteraka plug?
Manaraka: tsy misy